ထိတ်လန့်သည်းဖိုဇာတ်ကားတွေကြိုက်တယ်ဆို ဒီကားလေးအမြန်သာပြေးကြည့်လိုက်တော့… – Trend.com.mm
ထိတ်လန့်သည်းဖိုကားတွေ၊စိတ္တဇဇာတ်ကားတွေကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် Horror ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
Lake Placid: Legacy ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ။၂၀၁၈ ထဲမှာထွက်ရှိထားတာဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာက Darrell Roodt ဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့အနုပညာရှင်တွေကတော့ Katherine Barrell ၊ Tim Rozon ၊ Sai Bennett နဲ့ Joe Pantoliano ၊ တို့ပါ။နောက်ထပ်အနုပညာရှင်များစွာလည်း ပါဝင်အားဖြည့်ထားပါသေးတယ်။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးက အသစ်အဆန်းတွေကို စူးစမ်းလေ့လာရတာ၊ရှာဖွေရတာစိတ်အားထက်သန်တဲ့လူငယ်အုပ်စုတစ်စုဟာ မြေပုံထဲမှာ၊GPS စနစ်မှာတောင်မပါတဲ့နယ်မြေတစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာ တည်နေရာအတိအကျဘယ်သူမှမသိတဲ့နေရာကို သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီး အဲ့ဒီကိုရောက်တဲ့အခါစွန့်ပစ်ထားတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုတွေ့ရှိလာခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီစွန့်ပစ်ခံမြို့မှာ သူတို့ဘာတွေတွေ့ကြုံရမလဲ?ဒီနေရာကိုရောက်လာရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကရော ဘာလဲ?
သူတို့တွေ့ခဲ့တဲ့မြို့က ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကြောင့်စွန့်ပစ်ခံဖြစ်သွားရတာလဲ?ထိတ်လန့်စရာတွေ၊မယုံနိုင်စရာအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ဒီနေရာမှာလူငယ်အုပ်စုတစ်စု အန္တရာယ်တွေကို ကောင်းကောင်းကျော်ဖြတ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားမှုအပြည့်နဲ့ကြည့်ရှုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ထိတျလနျ့သညျးဖိုကားတှေ၊စိတ်တဇဇာတျကားတှကွေိုကျနှဈသကျတဲ့ပရိသတျတှအေတှကျ Horror ဇာတျကားလေးတဈကားနဲ့မိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ။
Lake Placid: Legacy ဆိုတဲ့ ဇာတျကားလေးပါ။၂၀၁၈ ထဲမှာထှကျရှိထားတာဖွဈပွီး ဒါရိုကျတာက Darrell Roodt ဖွဈပါတယျ။ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့အနုပညာရှငျတှကေတော့ Katherine Barrell ၊ Tim Rozon ၊ Sai Bennett နဲ့ Joe Pantoliano ၊ တို့ပါ။နောကျထပျအနုပညာရှငျမြားစှာလညျး ပါဝငျအားဖွညျ့ထားပါသေးတယျ။
ဇာတျလမျးအကဉျြးလေးက အသဈအဆနျးတှကေို စူးစမျးလလေ့ာရတာ၊ရှာဖှရေတာစိတျအားထကျသနျတဲ့လူငယျအုပျစုတဈစုဟာ မွပေုံထဲမှာ၊GPS စနဈမှာတောငျမပါတဲ့နယျမွတေဈခုကို ရှာဖှတှေသှေ့ားခဲ့ပါတယျ။သူတို့ဟာ တညျနရောအတိအကဘြယျသူမှမသိတဲ့နရောကို သှားဖို့ဆုံးဖွတျခဲ့ကွပွီး အဲ့ဒီကိုရောကျတဲ့အခါစှနျ့ပဈထားတဲ့မွို့တဈမွို့ကိုတှရှေိ့လာခဲ့ရပါတယျ။အဲ့ဒီစှနျ့ပဈခံမွို့မှာ သူတို့ဘာတှတှေကွေုံ့ရမလဲ?ဒီနရောကိုရောကျလာရတဲ့အဓိကအကွောငျးရငျးကရော ဘာလဲ?
သူတို့တှခေဲ့တဲ့မွို့က ဘယျလိုအကွောငျးအရာတှကွေောငျ့စှနျ့ပဈခံဖွဈသှားရတာလဲ?ထိတျလနျ့စရာတှေ၊မယုံနိုငျစရာအဖွဈအပကျြတှနေဲ့ပွညျ့နှကျနတေဲ့ဒီနရောမှာလူငယျအုပျစုတဈစု အန်တရာယျတှကေို ကောငျးကောငျးကြျောဖွတျနိုငျပါ့မလားဆိုတာ စိတျဝငျစားမှုအပွညျ့နဲ့ကွညျ့ရှုရမှာပဲဖွဈပါတယျ။